Umnikazi wefayela lomshwalense
Isiphathi Semali Ye-PP
Isiphathi sefayela le-PP
Umnikazi wefayela le-PVC
IPLAKITHI LOKUPHAKATHI KWAMAPLAKA - UKUKHULA, UKUQHUBEKA, NOKUSEBENZA (2020 - 2025)
Imakethe yokupakisha epulasitiki ibingabiza ama-USD 345.91 billion ngo-2019 futhi kulindeleke ukuthi ifinyelele kunani lama-USD 426.47 billion ngo-2025, ku-CAGR ka-3.47% esikhathini sokubikezela, i-2020-2025. Uma kuqhathaniswa neminye imikhiqizo yokupakisha, abathengi babonise ukuthambekela okwandayo kokufakwa kwepulasitiki ...Funda kabanzi »
Ukubuyekezwa kwe-Packaging Innovations 2019: Ama-Plastics abheke phambili kubaphikisi abasuselwa ku-fiber
Isikhathi Iposi: Jul-27-2020
9 Sep 2019 - Umdlandla wokusimama kokusimama kwemvelo emaphaketheni uphinde waba ngaphezulu kohlelo ku-Packaging Innovations eLondon, e-UK. Ukukhathazeka okuyimfihlo kanye nomphakathi ngokunyuka kokungcoliswa kwepulasitiki emhlabeni jikelele kuholele ekutheni kuthathwe izinyathelo zokulawula, uhulumeni wase-UK uzimisele ...Funda kabanzi »
Ipulasitiki iyinto equkethe noma yiziphi izinhlobo ezahlukahlukene zokwenziwa noma okomzimba owenziwe ngezinto ezithambile futhi ezingabunjwa zibe izinto eziqinile. Ubuplastiki buyimpahla ejwayelekile yazo zonke izinto ezingakhubazeka ngokungenakuphikiswa ngaphandle kokwephula kepha, ekilasini le-polym elibunjiwe ...Funda kabanzi »
Amathrendi Wokupakisha Kweplastiki we-2020
U-Bishop Beall kaChroma Colour uxoxa ngemibono yakhe ngamathrendi abalulekile okumele acatshangelwe ekwakhiweni kokufakwa kwepulasitiki phambili.Ozakwethu nami besilokhu sibika ngokuqhubekayo ngodaba lokusimama nemizamo eqhubekayo embonini yezomnotho eyindilinga ebanzi, kufaka phakathi izinto zokwengeza kanye nokwengeza .. .Funda kabanzi »
Ukuphinda ucabangisise ukufakwa kwepulasitiki - kubhekiswe emnothweni oyindilinga
Ukupakisha kwepulasitiki: inkinga ekhulayo Nciphisa, phinda usebenzise, ​​phinda usebenzise kabusha amaphesenti ayi-9 okupakisha kwepulasitiki emhlabeni wonke njengamanje kusetshenzisiwe kabusha.Yonke iminithi ilingana neloli elilodwa lodoti lokuvuza kwepulasitiki emifudlaneni nasemifuleni, ekugcineni kugcina olwandle. Kulinganiselwa ukuthi kufa izilwane zasolwandle eziyizigidi eziyikhulu unyaka ngamunye ...Funda kabanzi »
Ukuthi Ukunyakaza Okumahhala Kweplastiki Kuthinta Kanjani Ukupakisha kanye Nokwakhiwa Komkhiqizo
Ukuthi Ukuhamba KwePlastic Free Kukuthinta Kanjani Ukupakisha kanye Nokwakhiwa Komkhiqizo Ukupakisha nokwakhiwa komkhiqizo kuhambelana nokuthengwa njengoba sazi. Thola ukuthi ukunyakaza okungenapulasitiki kukudala kanjani ukushintsha kokuthi imikhiqizo ikhonjiswa, yenziwa futhi ilahlwe kanjani. Ngaso sonke isikhathi uma ungena esitolo ...Funda kabanzi »
Sibutsetelo sePlastiki Yokusebenzisa Kabusha
Ukuphinda kusetshenziswe kabusha kwepulasitiki kusho inqubo yokubuyisa udoti noma udoti wepulasitiki nokwenza kabusha izinto zibe yimikhiqizo esebenzayo newusizo. Lo msebenzi waziwa njengenqubo yokuphinda usebenzise kabusha ipulasitiki. Umgomo wokusebenzisa kabusha ipulasitiki ukunciphisa amazinga aphezulu okungcoliswa kwepulasitiki ngenkathi ubeka ngaphansi p ...Funda kabanzi »
Imikhiqizo eyinhloko ku-VIVIBetter ifaka phakathi zonke izinhlobo ze-PET nokufakwa kwendwangu, isikhwama esingenamanzi, ubhaka ongangeni manzi, izicathulo ezingangeni manzi namagilavu ​​kakotini, ama-mops, amathawula kanye nezindwangu izikhwama zokuthenga ezahlukahlukene njalonjalo. Isiqubulo sethu sithi "Ikhasimende lingunkulunkulu wethu nekhwalithi yethu ebekwa kuqala. Ukucabanga ngamakhasimende nganoma yisiphi isikhathi. Xazulula inkinga kuqala"
Ucingo: + 86-13352793058